[ဗီဒီယို] သင်၏တယ်လီဂရမ်စတစ်ကာများကို WhatsApp တွင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့ယခုလက်တွေ့ပြောဆိုသောလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်နှင့်အတူပြန်လာသည်။ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုဖြစ်သော Telegram နှင့် WhatsApp တို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပေါင်းစည်းရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသော်လည်းငါသွားမည်။ သင်၏ Telegram Stickers ကို WhatsApp တွင်မည်သို့ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မည်သို့သုံးရမည်ကိုအဆင့်ဆင့်သင်ကြားပေးသည်.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူများစွာကငါ့ကိုမေးခဲ့တဲ့လက်တွေ့ကျဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ တယ်လီဂရမ်မှသုံးစွဲသူအများစုသည်မိမိတို့၏နောင်တအတွက် WhatsApp အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည် လူအများစုကဲ့သို့ပင်ရိုးရှင်းသည့်အချက်မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်အားစွန့်လွှတ်ရန်မဆုံးဖြတ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေမျိုးများနှင့်အဆက်အသွယ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ WhatsApp ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများမှဒေတာများကိုဖြန့်ဝေပေးသည့် telemarketers များအတွက်ဤအချက်သည်အဓိကအားဖြင့်တရားမျှတမှုမရှိသောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် Telegram ကဲ့သို့သောပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးချဆော့ဝဲများကိုအခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဤသည်မှာ Mark Zuckerberg မှပိုင်ဆိုင်ထားသည့် app များကိုအတင်းအကြပ်ပြုလုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အမြားတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဗီဒီယိုပိုဒ်၏အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးပြီး၊ WhatsApp ကကျင့်သုံးသောလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်၏ဒေါသကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းနှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုကောင်းသောလျှောက်လွှာများကိုထိခိုက်သည်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်အချိန်ရောက်လာပြီ ဒီပို့စ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုမင်းဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲ။
Un လက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုအားသင်အကြိုက်ဆုံးစတစ်ကာများကို Telegram မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတရားဝင် WhatsApp application သို့လွှဲပြောင်းရန်အတွက်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်။ Telegram နှင့်ပတ်သက်လျှင်အရည်အသွေးနိမ့်ကျနေသော်လည်း၎င်းမှနောက်ဆက်မှအသုံးပြုရန်။
ဒီလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုသင်၏ပုံသဏ္orာန်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးရိုးရှင်းသောအချက်အနေဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုသေချာအောင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Android မှလုပ်သမျှအရာအားလုံးသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် terminal တွင်လည်ပတ်သကဲ့သို့။
ဒါကြောင့်ယခုသင်သိပြီ၊ ဗီဒီယိုနိဒါန်းတွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သကဲ့သို့မြင်ကွင်းခလုတ်ကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့်နှိပ်ထားသော်လည်းသတိပြုရန်မှာသင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်၊ သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုဒေါင်လိုက်အနေအထားတွင်ထားရှိခြင်းကိုသင်သိပြီ။ ။
သင်၏ Sticker ကို Telegram မှ WhatsApp သို့ဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့ရမလဲ
၏ဖြစ်စဉ်ကိုရရန် သင်၏စတစ်ကာများကို Telegram မှ WhatsApp သို့လွှဲပြောင်းပါ, ပို့စ်ရဲ့အစမှာငါစွန့်ခွာကြောင်းဗီဒီယိုတွင်ငါညွှန်ပြသကဲ့သို့, ငါတို့သာ Telegram များအတွက်သေဒဏ်စီရင်သို့မဟုတ် bot ရဲ့ start လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, \_ t သင်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်သော bot။ Android အတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့်လျှောက်လွှာသည်နာမတော်ကိုတုံ့ပြန်သောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများ, ဤလိုင်းများအောက်မှငါထွက်ခွာမည့်အကွက်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင် Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
Bot စတင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသောစတစ်ကာအထုပ်၏လင့်ခ်ကိုသူ့ထံသို့ပေးပို့ပါ bot သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ပို့ရန်အတွက်၊ WhatsApp မှမည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုင်တွယ်စရာမလိုဘဲ၎င်းတို့အားအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သော extension နှင့်အတူ zip format ဖြင့် compressed ဖိုင်တစ်ခုကိုပြန်ပို့သည်။
သက်ဆိုင်ရာ icon pack ၏ zip ဖိုင်ပါသည့် message ရောက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ internal memory ထဲသို့ Downloads folder သို့ download လုပ်ပြီး download လုပ်ပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့်အတူ ES File Explorer သို့မဟုတ် Solid Explorer ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ယခင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသော application ကို WhatsApp အတွက် Personal Stickers ကိုသာ run ရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ unzipped လုပ်ထားသော Stickers pack ကိုရှာပြီး Add ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပါသည် WhatsApp တွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော Telegram မှကူးယူထားသောစတစ်ကာများ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [ဗွီဒီယို] သင်၏ Telegram Stickers ကို WhatsApp တွင်အသုံးပြုနည်း